Fitsipahana ny minisitra HVM : hitarika vahoaka ho eny amin’ny lapan’i Mahazoarivo ny depiote | NewsMada
Fitsipahana ny minisitra HVM : hitarika vahoaka ho eny amin’ny lapan’i Mahazoarivo ny depiote
Mitohy ny hetsika ary niova tanteraka. “Ho any Mahazoarivo isika rahampitso (anio) hitaky amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian ny hanesorana ireo minisitra HVM ao anaty governemanta. Tsy azo ekena izao zava-misy izao satria tsy firaharahana vahoaka. Tsy hahafoana ny kolikoly ireo minisitra HVM satria efa maloto. Tsy azo antoka ny hanaovana fifidianana madio sy mangarahara. Sambory izahay raha sahy ianareo. Tsy hanakorontana izahay akory… ”, hoy ny depioten’ny fanovana, i Tody Arnaud, tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, omaly. Hifamotoana etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey izy ireo, anio maraina, mialoha ny hizorana eny Mahazoarivo. Nanaovan’izy ireo antso avo koa ny vahoaka any amin’ny faritany sy ny faritra mba hanao hetsika fitakiana ny hialan’ireo minisitra HVM ireo.
Etsy andaniny, nisaoran’ireo depiote ny vahoaka sy ny mpianatra fa nahomby ny diabe niainga teny Ankatso nihazo ny teny Fiadanana nanakatonana ny minisiteran’ny Fampianarana ambony, nitakiana ny fialan’ny minisitra HVM, Rasoazananera Marie Monique. Nahitsy kosa ny mpitondra tenin’ny depiote 73 (D73) nilaza fa miombon-kevitra izy ireo amin’izao diabe ho eny Mahazoarivo izao ary iraisana amin’ny vahoaka izany. “Efa hetsi-bahoaka ho amin’ny fanovana ny antsika ka tsy misy matahotra eto. Na izany aza, mbola misy vary mangatsiakanay eny Tsimbazaza ka tsy maintsy hifampizara izahay. Handinika ny fanitsiana ny tetibola rahampitso (anio) ka hanarahanay maso indray raha mbola hisy vola amin’ny gony efa fanaon’izy ireo eny… Tsy mbola ambara antsika ny paikady fa efa misy fitoriana hafa vonona koa izao any…”, hoy izy.
Nampitandrina ny mpitandro filaminana ny depiote
Nanome tsiny nefa naneho fahavonana hanampy ireo mpiasa sy sendikà ny depiote manoloana ny tsy nihetsehan’ny sasany tamin’ny fotoana nakana minisitera ireny. Mikoropaka anefa amin’izao fotoana izao miantso ny vahoakan’ny 13 mey hanohana azy. “Ho avy izahay ary tsy manary anareo. Tompon’andraikitra voalohany anefa ianareo amin’ny fanidiana ny minisitera sy ny fiambenana izany, tsy hiverenan’ny minisitra eo intsony” , hoy ihany izy.